Dhaqanka - Absolut Viajes | Safarka Absolut (Bogga 2)
Baro Popayán, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee gumeysiga ee Kolombiya iyo Latin Amerika.
Baba Yaga, oo ah dabeecadda Ruushka ee ka muuqata meel kasta laga soo bilaabo Dragon Ball ilaa Hellboy ilaa Netflix.
Australia waa wadan aad u balaaran. Ma ogtahay inay ka baxdo qamadi, shaciir, bariis iyo bakoorad sonkor ah. Maxay leeyihiin lo'da iyo lo'da maxaa sameeya dhogorta adduunka ugu fiican?
Savita Bhabhi waa sheeko qosol badan oo qaawan oo Hindi ah, laakiin faafreeb lagu sameeyay.
Kafee iyo keega, sida ugu fiican quraacda caadiga ah ee Rome. Qaar ka mid ah xulashooyinka lagu raaxeysto quraac Talyaani ah oo caadi ah oo aan kaa niyad jabin doonin.
Hindi, Bengali, Nacayb, Malayalam, Urdu ... kuwani waa wax yar oo ka mid ah luqadaha badan ee lagaga hadlo Hindiya, oo ah luuqado dhalaalaya.
Khuraafaadkii Apollo, mataantii Artemis
Ciidaha loo yaqaan 'Anglo-Saxon holiday' ee Halloween ayaa ku baahday dalka Talyaaniga oo dhan aad ayeyna caan uga yihiin dhalinyarada, laakiin sidee loogu dabaaldegaa Halloween dhaqanka Talyaaniga?
Halyeeyga Hans Brinker
Baro sida caadiga ah suugaanta dhalinyarada qarnigii XNUMX-aad: Hans Brinker ama siligga qalinka.
Ku saabsan Amazons waxaa jiray halyeeyo badan kuwa badanna waxay la yaabeen inay wax run ah ku jiraan. Maanta waxaan ku dhex milmaynaa quraafaadkii Amazons.
Qalabka muusikada ee Shiinaha ayaa markhaati u ah dhaqan kun sano jirsaday iyo muujinta dhaqan muusig oo qadiimi ah oo ku nool.
Gobolka qadiimiga ah ee Tierradentro, ee Cauca
Mid ka mid ah khasnadaha waaweyn ee ilbaxnimadii hore ee Columbian-ka ee Kolombiya ayaa laga helaa Beerta Tierradentro National Archaeological Park.
Vishnu: Mid ka mid ah ilaahyada ugu muhiimsan Hindiya
Ma jeceshahay inaad u safarto Hindiya fasaxaaga dambe oo aad xiiseyneyso inaad wax badan ka ogaato dhaqankeeda iyo ...
Filimada qaar ayaa lagu duubay Venice
Kahor intaadan aadin Venice, maxaad u arki weyday qaar ka mid ah filimaan badan oo lagu soo duubay magaaladan quruxda badan?
Nolosha Gay ee Griiga: Griiga iyo dalxiis kuxiran gayiga
Giriiggu had iyo jeer wuxuu kujiraa liiska meelaha loogu tago qaniisiinta adduunka, taariikhdeeda darteed iyo sababta oo ah jasiiradeeda waxay noqdeen meccas dalxiis saaxiibtinimo dalxiis
Polyphemus iyo Odysseus
Dhacdooyinka Ulysses ee Jasiiradda Cyclops sidii uu isugu diyaarinayay inuu ku laabto gurigiisa ka dib dagaalkii Trojan.
Muusikada dhaqanka ee norwejiga
Muusikada hiddaha iyo dhaqanka ee norwejiga, oo xididdadeeda leh xilliyadii dhexe, ayaa hadda la kulmaya casri cusub oo dahabi ah.
Guriga Romeo ee Verona
Qof kastaa wuu ogyahay Balcony-ka caanka ah ee Juliet ee Verona, Italy. Taa bedelkeeda, Aqalka Romeo aad looma yaqaan.
Asalka maktabada oo ah meel lagu ilaaliyo qoraalada iyo aqrinteedu waa Mesobotamiya, laakiin wax yar kadib waxay u gudubtay Masar iyo Griiga.
Kolombiya, oo ah wadan dhaqamo badan leh
Sida dalal kale oo badan oo Mareykan ah, Kolombiya waa waddan dhaqamo badan leh, oo ah dheriga dhalaalaya ee nooc kasta oo jinsiyado iyo ilbaxnimo ah.
Acropolis of Athens waa astaanta weyn ee caasimada Giriigga waxayna astaan ​​u tahay sharafta iyo awooda ilbaxnimadii hore ee Griiga.
Caleenta Maple, oo ah astaanta Kanada
Caleen khariidad ahaan oo astaan ​​u ah Kanada waxay xididdadiisa ku leedahay taariikhda deggeneyaashii ugu horreeyey ee dhulka Waqooyiga Ameerika.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhaqanka reer Peru
Dhaqanka reer Peru waa natiijada isku dhafka weyn ee walxaha dhaqanka ee dadyowga kala geddisan ee deggenaa waxa hadda ka jira dhulka Peru.
Caadooyinka bulshada Griiga
Caadooyinka bulshada Griiga, oo soo jiita dareenka aad u badan ee socotada soo booqanaya dalka, waxay dhaxlayaan taariikh dheer iyo dhib badan oo dalka soo martay.
Tacliinta caruurta Spartan
Waxbarashada carruurta Spartan waxay dooneysay inay tababarto dagaalyahanno waaweyn. Sidaa darteed, waxay abuureen mid ka mid ah ciidammadii ugu cabsida badnaa ee soo jireenka ahaa.
Halyeeyga 'The Patron of Athens'
Halyeeyga ilaaliyaha Athens wuxuu sheegayaa sida doorashadu uga bilaabatay khilaaf u dhexeeya ilaahyada Poseidon iyo Athena, oo kan dambe ku guuleystay.
Waxaa jiray addoomo ku sugnaa Giriiggii hore, xaaladdooda liidata si weyn ugama duwaneyn tii Masar ama Rome.
Erayada aasaasiga ah ee Cuba waxay asal ahaan ka soo jeedaan Isbaanishka iyo Taíno hoostiisa iyo saameynta Afrika iyo Mareykanka.
Luqadahahee looga hadlaa Masar?
Haddii aad rabto inaad ogaato luuqadaha lagaga hadlo Masar, waxaan kuu sheegaynaa, marka laga reebo Carabiga, inay jiraan kuwa ku hadla horyaalada Nubia, Beya iyo Domarí.
Nadaísmo waa reer Colombia
Nadaísmo wuxuu ku dhashay magaalada Medellín 60s isagoo ah suugaan iyo falsafad diidka deegaanka dhaqameed ee ay aasaaseen akadeemiyada, kaniisada iyo dhaqanka.
The 'Baile de las Cintas', oo ah mid ka mid ah qoob-ka-ciyaarka dhaqameed ee ugu caansan Yucatán
Asalka qoob ka ciyaarka Ribbons ee maanta caanka ka ah Yucatan iyo meelaha kale ee Mexico, wuxuu ku yaal dhinaca kale ee Badweynta Atlantik.
Calanka Giriiggu muxuu metelaa?
Calanka Giriiggu waa astaanta qaranka ee gobolka Griiga casriga ah laga soo bilaabo 1978 calanka kaliya ee rasmiga ah. Tani waa macnaha qaabkeeda iyo midabbada.
Caadooyinka Nederlandka ee Kirismaska
Caadooyinka Nederlandka iyo caadooyinka Kirismasku waxay leeyihiin waxyaabo gaar ah oo ka dhigaya kuwo ka duwan oo gaar ahaan soo jiidasho leh.
Qoob ka ciyaarka Afro Peruvian
Muusikada iyo qoob-ka-ciyaarka Afro-Peruvian-ka waxay ka mid yihiin kuwa ugu muuqaalka iyo muujinta farshaxanka gaarka ah dhaxalka dhaqanka Peru.
Cumbia, laxanka wakiilka ee Colombia
Cumbia-ka Colombia waa mid ka mid ah astaamaha aqoonsiga qaran ee Kolombiya. Noocan muusigga ah iyo qoob-ka-ciyaarka dadku wuxuu ku dhashay xeebta Kariibiyaanka, in kasta oo si fiican loo yaqaan oo looga helo waddanka oo dhan.
Tiyaatarada qadiimiga ah ee Griiga
Maxay ahaayeen masraxiyadihii hore ee Griiga sidii masiibooyin iyo majaajilooyin lagu qabtay? Waan kuu sheegi doonaa.
Maxay Masriyiintii hore ahaayeen
Haddii aad la yaabto sida ay ahaayeen Masriyiintii hore, waxaan kuu sheegi doonnaa in ilbaxnimadooda ay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan uguna qalafsan xilligooda.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee farshaxanimada Dominican waa Limé caruusadaha, maaskaro, iyo amber iyo dahabka larimar.
Ciidda Kirismaska ​​ee Kanada iyo dhaqankeeda
Ciidda Kirismaska ​​ee Kanada iyo caadooyinkeeda waxaa ka buuxa caadooyin xiiso leh, laakiin sidoo kale waxay iska shabahaan kuwayaga badan.
Polska, sheydaanka qoob ka ciyaarka Iswiidhan
Ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Sweden ugu caansan waa polska (yaan lagu jahwareerin polka ama polka, asal ahaan ...
Waxbarashada carruurta Athenia
Mar kasta oo aan fiirino Griiga caadiga ah waxaan si hubaal ah u heli karnaa isbarbardhiga iyo mucaaradka u dhexeeya Athens ...
Fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Masar hore
Dalka Niil wuxuu lahaa taliyayaal badan intii ay jirtay. Soo hel kuwaas oo ah kuwa ugu muhiimsan fircoonnadii hore ee Masar.
Xarfaha iyo qoraalka Giriiggii hore
Xarfaha iyo qorista Giriiggii hore waxaa looga dayday kuwii ay abuureen Phoenicians-ka. Kuwani, oo ka soo jeeda ...
Sidan ayaa lagu been abuurtay Xorriyadda Kolombiya
Taariikhda rasmiga ah ee lagu dhawaaqay madax-bannaanida Jamhuuriyadda Kolombiya waa Luulyo 20, 1814….
8 qoob ka ciyaarka aduunka
Kuwani 8 qoob ka ciyaarka adduunka kaliya maahan inay kugu casuumaan inaad dheesho, laakiin sidoo kale inaad si fiican u fahamto saameynta iyo dhaqanka geesaha kala duwan ee meeraha.
Xaafadaha iyo buundooyinka Elche
Maanta Elche waxay leedahay xaafado badan, cusub oo dhaqameed, ka weyn ama ka yar, laakiin mid kasta oo ka mid ah ...
Wieliczka Cusbada Aniga
Soo ogow miinooyinka milixda ee sidoo kale loo yaqaan cathedral cusbada dhulka hoostiisa ah. Waxay ku yaalliin magaalada Poland ee Wieliczka.
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay yihiin caadooyinka Kanada iyo maxay yihiin ciidaha ugu caansan ee Kanada oo kumanaan qof ay ka soo qayb galaan sannad kasta. Ma taqaan iyaga?
Waxaan kuu soo qaadaneynaa soo koobitaan leh caadooyinka ugu caansan ee Venezuela: qoob ka ciyaarka, sida Joropo, marka lagu daro dhaqanada, heesaha iyo waxyaabo kale oo badan!
Tatami-ka Jabbaan waa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee dalka Jabbaan iyo, suurtagal ahaan, mid ka mid ah kuwa ugu yar ee ay fahmaan reer galbeedka.
Soo ogow dhammaan qarsoodiyada dharka caadiga ah ee reer Kolombiya ee Sanjuanero Huilense, oo ah caado aad u caan ah oo reer Kolombiya ah oo kaa yaabin doonta daabacdeeda.
Muusikada dhaqanka ee Ruushka iyo dharka caadiga ah ee Ruushka
Macluumaad ku saabsan dharka caadiga ah ee Ruushka, taariikhdeeda, qaababka midabkiisa iyo in ka badan. Sidee u labbisteen inay ku raaxaystaan ​​muusikada dhaqanka ee Ruushka?
Soo ogow dhaqamada ugu muhiimsan ee Venezuela. Ma ogtahay kuwa ugu caansan dhaqanka Venezuela? Soo ogow!
Dhaqanka reer Colombia
Colombia waxay leedahay kala duwanaansho dhaqameed gaar ah, haddii aad rabto inaad si qoto dheer u ogaato dhaqanka reer Colombia, ha moogaan falanqayntayada ku saabsan gobolkan xiisaha leh
Xirfadaha dhaqameed ee Jabaan
Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato farsamooyinka Japan ee soo jireenka ah? Waxaan kuu sharraxeynaa dhammaan sirta dhaqanka iyo hiddaha Japan
Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato dhaqanka Cuba? Waxaan ku tusineynaa dhammaan sirta caadooyinka Cuba: dhaqanka, caloosha, xafladaha, isboortiga iyo waxyaabo kale oo badan
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan caadooyinka iyo caadooyinka Hindiya, waddan gaar ah oo u taagan diimahooda, caloosha iyo xiisaha
Waxaan kuu soo gudbineynaa dhammaan sirta diinta ee Morocco: taariikhda, dhaqanka, cibaadada iyo fikradaha waddan raacaya dhaqanka muslimiinta
Boortaqiiska waa wadan u gaar ah oo loo safro, laakiin ma jiraan wax ka fiican ogaanshaha caadooyinkeeda inaad ugu raaxeysato si buuxda oo aad u ogaato sida dhaqanka Bortuqiisku yahay.
Dharka Dutch, waa sax
Waxaan kuu soo gudbineynaa dhammaan sirta dharka Dutch-ka ee dhaqanka: xirmayaasha caanka ah ama komplen, dharka dhaqanka iyo waxyaabo kale oo badan
7da meelood ee ugu midabada badan Africa
Laga soo bilaabo tuulooyinka maskaxda ee Koonfur Afrika ilaa jardiinooyinka buluugga ah ee Marrakech, 7dan meelood ee ugu quruxda badan Afrika ayaa kugu adkaan doona.
Taariikhda calanka Marooko
Calamo badan oo adduunka ah oo aan ku nool nahay waxay leeyihiin taariikh gaar ah oo mararka qaarna xiiso leh oo aan ...
Caadooyinka iyo dhaqanka bulshada reer Bortuqiiska
Waxaan ku tusaynaa caadooyinka iyo dhaqamada waaweyn ee Boortaqiiska, adoo maraya farshaxanada, gastronomy, xafladaha iyo farshaxanka Portuguese.
Diinta Masar casriga ah
Diinta Masaarida ayaa waligeed xukumi jirtay nolosha dadka deegaanka. Islaamku waa kan ugu awoodda badan, kadib Kirishtaanka iyo Yuhuudda. Wax walba waan ku sharaxeynaa halkan
Xeerarka dhaqanka Japan
Safarka aad ugu tageyso Japan waa khibrad lama iloobaan ah inkasta oo ay tahay inaad tixgeliso xeerarka dhaqanka iyo hab maamuuska Japan
Caadooyinka iyo dhaqanka
Ma rabtaa inaad ogaato dhammaan caadooyinka iyo caadooyinka bulshada Noorweey? ha moogaanin qodobkaan halkaan kusoo bandhigeyno dhaqankooda oo dhan
Polska, qoob ka ciyaarka sheydaanka
Waxaan soo bandhigeynaa dhammaan sirta Swedish Polska, waxa loogu yeero qoob ka ciyaarka shaydaanka: taariikhda, dhaqanka iyo noocyada kala duwan ee polska
Caadooyinka iyo caadooyinka caadiga ah ee Irishka
Haddii aad u safreyso Ireland, wax ka wanaagsan ma ogaatid caadooyinka iyo caadooyinka caadiga ah ee dadka Irishka ah. Taasi ma ahan wax walba maalinta St. Patrick!
Ciyaaraha dhaqanka Dutch
Waxaan kuu soo qaadaneynaa isku soo uruurinta qoob-ka-ciyaarka dhaqameed ee ugu caansan Holland, si aad u ogaato sirtooda iyo dhaqankooda.
Caadooyinka iyo dhaqanka bulshada Norway
Ma ogtahay in bulshada noorwiijigu ay u tixgeliyaan qoyska wax aad u muhiim ah? waxaan ku tusaynaa dhamaan caadooyinka iyo dhaqamada noorwiijiga
Hindisaha Muhiimka ah ee Hindiya
Ma ogtahay in Shataranjiga lagu hindisay Hindiya. Maqaalkan waxaan ku muujinaynaa waxyaabaha ugu muhiimsan Hindida, in ka badan hal ayaa kaa yaabin doonta
Caadooyinka iyo dhaqanka Ingiriiska
Miyaadan ogeyn waxa ay yihiin caadooyinka iyo dhaqamada Ingriisigu? Waxaan ku baraynaa xisbiyada ugu muhiimsan, taariikhda shaah 5:00 ...
Matryoshka, caruusadda Ruushka
Ma rabtaa inaad ogaato sheekada ka dambeysa Matryoshka, caruusad caan ah oo Ruush ah oo loo kala jaray qaybo? halkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan sirta shaqadan xiisaha leh
Qaab dhismeedkii hore ee Shiinaha, farshaxan qoryo iyo leben
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan qarsoodiyada naqshadaha qadiimiga ah ee Shiinaha, halkan waxaan ku tusaynaa: sifooyinka, astaamaha, naqshadaha, agabka ...
Farshaxanka Shiinaha, qalabka iyo farsamooyinka wax soo saarka
Farshaxanka Shiinaha waxaa lagu gartaa iyadoo la adeegsanayo waxyaabo kala duwan, sida fool-maroodiga ama dhoobada. Halkan waxaan ku tusaynaa dhammaan sirta soo saarkeeda
10 layaab leh oo dhaxal gal ah Unesco
10-kan layaabka leh ee Unesco aan la arki karin waxay u dhexeeyaan midabada Mexico ilaa yoga ilaa Fallas of Valencia.
Astaamaha qaar ee Shiinaha
Haddii aad rabto inaad ogaato astaamaha Shiinaha, sida qaabkooda, dhaqankooda ama dhaqankooda xiisaha leh, sii wad akhriska si aad u ogaato dhammaan sirtooda
Cabitaannada Giriigga ee caadiga ah
Baro cabitaannada Giriigga ee caadiga ah sida Ouzo, Metaxá, Retsina, Raki iyo kuwa kale oo ay tahay inaad isku daydo haddii aad u safreyso Griiga. Dhammaantood miyaad taqaan?
Soo ogow dhirta iyo xayawaanka Giriigga, waddan ay u qaybsan yihiin laba waxyaalood oo waaweyn sida kaynta Mediterranean iyo keynta dhirta adag.
Taariikhda tiyaatarka Venezuela
Haddii aad rabto inaad ogaato taariikhda tiyaatarka Venezuela, ha moogaanin falanqeyntan dhameystiran ee aan ku soo bandhigno dhammaan sirta tiyaatarka ee Venezuela
Ka baxsan nolosha Giriiggii hore
Maxay Giriiggii hore ka fikireen geerida?
Calanka Austria, sababta midabkeeda
Ma ogtahay sababta calanka Austria uu uyahay casaan iyo cadaan markii cowska Habsburg madow iyo jaalle ahaa?
Isbeddellada, caruusadaha ayaa xada carruurta
Ma ogtahay in Irish-kii hore uu aamminsanaa noolaha la yiraahdo beddelidda?
Caadooyinka iyo dhaqanka gobolka Amazon
Isku soo wada duub dhammaan faahfaahinta ku saabsan caadooyinka iyo dhaqanka reer Amazoniya si aad ugu raaxeysato safarkaaga adoo adeegsanaya Kolombiya Amazon si buuxda
Caadooyinka iyo dhaqamada England
Iyada oo leh caadooyinka iyo dhaqamada Ingiriiska, oo ah kuwo gaar ah, hoosta waxaan kuugu soo ururinaynaa dhaqammada ugu muhiimsan ee waddankan ka jira.
Soo ogow soojiidashada si aad ugu raaxaysato Faransiiska
Paris waxay bixisaa dalxiisyo dabiici ah iyo xulashooyin dhaqameed sanadka oo dhan.
Dhaxalka dhaqanka ee Peru
Qoob-ka-cayaarro badan iyo muusig ayaa dhaqammada Peru ka dhigaya kuwo waara, oo ay Afrika ka geysteen dadyowga ka yimid Koongo, ...
Sayniska iyo falsafada Griiga
Griigii hore ma kala soocin falsafada iyo sayniska, ama cilmiga kala duwan sida ...
Immisa maalmood ayey ku qaadataa booqashada Montreal?
Waa in la sheegaa in joogitaanka 2-maalmood ee Montreal ay waxyar uga gaaban tahay wax kasta oo loogu talagalay ...
Ma xasuusataa drachma, lacagta Griiga?
Drachma wuxuu ahaa lacagta Griiga ilaa ay qaadatay euro sanadkii 2002
Inca diinta iyo cosmogony
Diinta Incas waa nidaam isku dhafan oo ah dhaqanno iyo caqiidooyin dhaqameed, oo lagu darayo dhaxalka dhaqammadii hore, laga ...
Socdaalka Yurub ee Peru
Maanta waxaa lagu qiyaasaa 4,4 milyan oo qof oo ka soo jeeda socdaalka Yurub ee ku sugan Peru, taasi waa ...
Meelaha ugu quruxda badan dhaqanka ee Griiga
Qof kastaa wuu ogyahay in Giriiggu yahay mid ka mid ah meelaha qadiimiga ah ee ugu muhiimsan ...
Shan filim si loo fahmo Ireland
Hubso inaad daawato shantaan filim ee ku saabsan Ireland maxaa yeelay waxay kaa caawin doonaan inaad ogaato oo aad fahamto dalkan quruxda badan.
Kylix, muraayadda khamriga ee Giriiggii hore
Waa maxay kylix? Koobkii ay Griiggii hore ku cabi jireen khamriga.
Taariikhda iyo juqraafiga Kanada
Kanada waa waddan aad u ballaaran waxayna leedahay muuqaal dabiici ah oo dabiici ah. Dhaqaale ahaan iyo qaab dhismeed ahaanba, waxay u egtahay deriskeeda ...
Shaqada iyo farshaxanka ranjiyeyaasha reer Peru
Qaabka loo yaqaan Cuzquiano waxaa lagu aqoonsaday aragti aad ufiican oo muuqaal ah oo muuqaallada matalaya, wejiyada dhaadheer iyo qaababka ...
Farshaxanka iyo farshaxanka Peruvian
Farshaxanka kahor-Columbian wuxuu kahelaa muuqaalkiisa ugu weyn dhoobada, iyo sidoo kale farshaxanka dhagaxa, dahablaha, ...
Giriiggu wuxuu ku yaal cirifka koonfureed ee Jasiiradda Balkan. Waxay leedahay aag ah 131.957 kiiloomitir oo laba jibbaaran, ...
Waa maxay muusikada laga maqlo Masar
Ma qorsheyneysaa inaad u safarto Dhulkii Faraaciinta, laakiin waxaad dooneysaa inaad ogaato muusigga laga maqlo Masar? Soo gal wax walbana waanu kuu sheegaynaa.
Barashada qoob ka ciyaarka ee New York
Waddooyinka New York waxaad ku neefsan kartaa farshaxan, tamar, midab, muusiko, qalaad. Dabcan, waqtiga ...
Dhaqanka Griiga iyo saamaynta reer Fayniya
Sannadkii 1300 ka hor dhalashadii reer Foyinia waxay u bixiyeen alifbeetada bina-aadamka. Wax yar ayaa ka haray ...
Booqo Taallada Victor Emmanuel II
Waad booqan kartaa Taallada loo yaqaan 'Victor Emmanuel II' ee Rome maaddaama tani ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago ...
Shiinaha iyo naxaasta
Shiineysku si fiican ayuu u bartay farsamooyinka naxaasta ah waxayna na dhaxalsiisay hanti aad u weyn
Filimada qaar oo ku saabsan Giriiggii Hore
Ha ka maqnaan mid ka mid ah filimyadan iyo taxanaha TV-ga ee ka hadlaya Giriiggii hore ama quraafaadkeeda
Soo helitaanka magaalada Lima ee Peru
Lima, magaaladan teendhooyinka ah ee seddex meelood meel reer Peruvians ah ku nool yihiin, si kastaba ha noqotee waxay soo bandhigtaa taajirnimo badan oo mudan in la ogaado taasna waxay kaa dhigeysaa inaad illowdo aragtida xun ee ugu horreysa bilowga.
Athens waa magaalo astaan ​​ah, oo ah xorriyadda, farshaxanka iyo dimuqraadiyadda. Maanta, magaaladan casriga ah, oo ay ka buuxdo nolol, waxay u fidisaa booqdayaasheeda waxyaabo badan oo soojiidasho ah, oo ay ku jiraan matxafyo, dukaamo kala duwan, xarumo dhaqameed oo wanaagsan, maqaaxiyo, aqallo ay ku cibaadeystaan, kaniisado, taallooyin iyo dhismooyin duug ah.
Waxa lagu arko gudaha kaniisadda Greek Orthodox
La kulan waxyaalaha qaarkood si aad ugu fiirsato gudaha kaniisadda Greek Orthodox
Naqshadeynta boodhadhka Ruushka ayaa loo adeegsaday inay tahay mid wax ku ool ah oo dhexdhexaadin xayeysiis ah, laakiin kaliya dhulka Soofiyeedka ayaa naqshadeynta boodhadhka ay ku heshay muhiimadda siyaasadeed.
Qasrigii Vilafamés, wuxuu markhaati ka yahay taariikhda magaalo
Qasriga Vilafamés, oo asal ahaan ka soo jeeda Carabta, wuxuu ku yaal meel ka sareysa magaaladii hore, laakiin waxaan kuu xaqiijinaynaa in aragtiyada iyo fuulitaanka fudud ay mudan yihiin.
The Collegio del Cambio, farshaxanka Renaissance ee Perugia
Mid ka mid ah booqashooyinka Perugia waa Collegio del Cambio, qolal taxane ah oo leh farshaxanka Renaissance ee Palazzo dei Priori
Caadooyinka iyo caadooyinka Peru
Pisco waa aalkolada ugu caansan ee loo yaqaan Peru. Waa khamri si ballaadhan loogu isticmaalo is biirsaday iyo gaar ahaan in laga sameeyo pisco dhanaan, isku dar dhadhan fiican oo mudan in la isku dayo.
Dhaqanka, farshaxanka iyo hiddaha Athens
Athens waxaa badanaa lagu sheegaa sheekooyinka Griiga. Atheeniyiintii hore waxay aamminsanaayeen inay asal ahaan ka soo jeedaan qowmiyadda Atticia oo aysan ka koobnayn dad soogalooti ah.
Athens, caadooyinka, qaababka nolosha iyo caadooyinka
Deganayaasha maxalliga ah waxaa lagu kala soocaa astaamo dabeecad sida dareen iyo gariir, in kasta oo ay jiraan xaalado masuuliyadeed, waxay muujin karaan dulqaad waxayna si fudud u xallin karaan khilaaf kasta. Shaki kuma jiro in Athens ay leedahay dhaqan u gaar ah heerka isgaarsiinta.
Tigidh tikidhada si aad u aragto Da Vinci Cashadi Ugu Dambeysay
Sida loo jarto tikidhada si loo arko Da Vinci Cashadii ugu dambeysay.
Taallo muhiim u ah England
Markan waxaan dooneynaa inaan kaaga warranno qaar ka mid ah taallooyinka ugu muhiimsan ee England, laga bilaabo Westminster Abbey.
Waababka taleefanka ee England
Waababka taleefannada ee England waa mid kale oo ka mid ah astaamaha iyo astaamaha kala duwan ee ka dhigaya waddankan gaar ahaan mid gaar ah iyo gaar ahaan magaalada London.
Filimadii waaweynaa ee shineemooyinka Austaraaliya
Qaar ka mid ah filimadii ugu fiicnaa shineemooyinka Austria
Suxuunta caadiga ah ee Switzerland
Iswiisarland wax walba maahan buuraha barafka ka buuxo, meelaha barafka lagu ciyaaro iyo muuqaalka jiilaalka, waxaa kaloo jira soojiidasho kale oo lagu raaxeysan karo
Xaasaska iyo naagihiisa dumarka ah, waxay ka turjumayaan Shiinaha qadiimiga ah
Filimka Xaaska iyo Naagtu waa filim caan ah oo u dhashay Shiinaha
Ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Dutch, hal-abuurnimo iyo dhaqan
Dhaqanka iyo qoob-ka-ciyaarka Nederlandka, gaar ahaan, wuxuu ka soo bilaabmay tuulooyin qadiim ah si dadka loogu faraxsiiyo damaashaadkooda. Waxay ka soo jeedaan Iskotish iyo Jarmal.
Magdalene toobadda, Caravaggio ee Rome
Magdalene oo toobad keenta waa shaqo farshaxan ah oo uu sameeyay Caravaggio oo ku taal Rome
Halkee laga arkaa kan ugu wanaagsan Gustav Klimt
Goobaha iyo matxafyada lagu soo bandhigo waxa ugu wanaagsan Gustav Klimt
'Sab', waa buuggii ugu horreeyay ee taariikhda ka soo horjeeda addoonsiga
Maanta waxaan ka hadleynaa suugaanta Caribbean-ka waxaanan badbaadineynaa sheeko 'Sab', oo uu qoray Kuuba Gertrudis Gómez de Avellaneda, oo loo tixgeliyey buuggii ugu horreeyay ee kahortaga addoonsiga.
Qiyaas ahaan heer qaran, mid maxalli ah iyo mid shaqsiyeedba, Kanada waxay ku xustaa allabaryo ay ogolaadeen dadkeeda intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka.
Waqtiga ugufiican ee la booqdo Mérida
Xilliga dayrta, Mérida waa magaalo aad u qurux badan, oo leh cimilo dhexdhexaad ah.
25-kii Abriil, Maalintii Xorriyadda Talyaaniga
25-ka Abriil, waxaa la xusaa Maalinta Xorriyadda Talyaaniga
Koodhka hubka iyo astaamaha magaalada Amsterdam
Jaakadda hubka ee Amsterdam waxay leedahay saddex iskutallaabood, "iskutallaabtii St. Andrew" oo lagu sharfayo Rasuul Andrew, oo kalluumeysato ahaa, wuxuuna ku shahiiday iskutallaab u eg qaabka X.
Dhaqanka, dhismaha iyo muusikada Peru
Taariikhdeeda darteed, dhaqanka Peru waa isku dhaf dhaqamo kala duwan laakiin taasi waxay ku lug leedahay kala duwanaansho badan iyadoo kuxiran gobolka wadanka.
Hees jacayl oo qaraami ah oo reer Masar ah
Jilaaga iyo heesaaga Peter Pringle ayaa curiyey hees jacayl oo Masri ah oo qadiimi ah qoraalna laga soo qaatay Chester Beatty Papyrus. Ma rabtaa inaad maqasho?
Clogs iyo koofiyad far cad leh, astaamaha lagu yaqaan dharka hidaha iyo dhaqanka Dutch
Dharka caadiga ah ee Nederlandka ayaa ku lug leh xirmooyin, surwaal madow isaga iyo dhexdiisa astaantiisa cad ee tilmaanta cad, taas oo kaliya dhaqan ka ah gobolka Volendam.
Bisadda madow oo astaan ​​u ah khuraafaadka ka jira Masar
Adduunyada xagjirnimada iyo khuraafaadka, bisadaha taariikh ahaan waxaa lala xiriiriyay caqiidooyinka ku saabsan awoodaha sixirka si weyn ...
Dunida shaqada ee haweenka Ruushka
In kasta oo muddadii ka dambaysay doorka haweenka Ruushku ay si aan caadi ahayn ugu kala duwanaadeen adduunka ...
Suugaanta Australia, shaqooyinka iyo qorayaasha
Australian waxay leedahay dhowr qoraa oo guuleysta iyo xitaa abaalmarinta Nobel ee suugaanta
Cyclamen, ubax qaran oo leh caraf Athenian ah
Cyclamen waa ubax jiilaal aad looga yaqaan Yurub. Afka ubaxyada, cyclamen wuxuu astaan ​​u yahay ...
Caadooyinka iyo dhaqanka bulshada Switzerland
Switzerland waxay sumcad ku leedahay inay saaxiibtinimo badan leedahay. Waxay si kalsooni leh u adeegsadaan tibaaxaha sida "fadlan", "mahadsanid" ama "ii oggolow" ee ...
Haweenka Masar hore
Haweenka ku noolaa Masar Hore si macquul ah ayey ugu noolaayeen si macquul ah. Xaqiiqdii, iyagu sifiican uma noolaan karin. Waxay lahaayeen guryo oo way xukumi karaan, iyo kuwo kale.
Amsterdam markii hore waxay ahayd magaalo Katoolik ah iyada oo aan loo diidin Protestant. Dhamaadkii qarnigii XNUMXaad waxaa soo shaac baxay Kaniisada Orthodox ee Reformed Calvinist.
Calaamadaha ugu caansan Kanada
Tower-ka “Cabot Tower” waxaa la dhisay 1897, waana taallo xusuus mudan oo 400 sano laga joogo daah-furkii Newfoundland, isagoo astaan ​​u ah jasiiradda Kanada.
Caadooyinka kirismaska ​​ee Awstaria
Qaar ka mid ah caadooyinka kirismaska ​​ee ugu wanaagsan Awstaria
Dhulka Fircooniga ah waxaan ka dhagaysan karnaa muusikada dadwaynaha, oo laga dhaxlay jiilal hore, taas oo kaa dhigaysa inaad ku riyootid qoraallada ugu horreeya.
Dhaqamada diinta iyo aaminsanaanta Hong Kong
Caadooyinka, caqiidooyinka diimeed iyo ruuxi ahaaneed ayaa door muhiim ah ka ciyaara nolosha dhammaan dadka deggan Hong Kong, iyadoon loo eegin inay booqdaan goob diineed.
Talooyin ku habboon oo ku yaal Croatia
Sidaa awgeed, waxaa jira taallooyin ku habboon oo Croatia dhexdeeda ah oo ka bilaabma kaniisadaha iyo daaraha waaweyn, kuwaas oo lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo farsamooyin casri ah oo kala duwan.
Taariikhda jasiiradda Corfu
Jasiiradda Corfu waxaa horay u xusay Homer, waxayna ahayd joogsigii ugu dambeeyay ee Ulysses (Jasiiradda Faiacs) halkaasoo uu ku guuldareystay markii uu degay markabkiisa.
Waa sidee waxbarashada Masar
Waxbarashada Masar hore waxay soo bandhigaysaa masaafo fog oo ka fog nidaamka waxbarasho ee bulshadeena maanta. Asal ahaan…
Boqorka Geesiga Daanyeerka
Boqorka Daanyeerka ayaa ka mid ah jilayaasha ugu caansan sheekooyinka Shiinaha
Carruur la beddelay, carruurtii carwooyinka
Caddooyinka Irishku waxay ka hadlayaan "carruurta la beddelay", carruurta ay carruurtu ku badasho carruurtu ee aan lahayn wax shucuur ah
Taariikhda Acropolis ee Athens
Acropolis waxaa deganaa ilaa 7.000 BC. Ilbaxnimadii Mycenaean oo dhan, darbiyo ayaa laga dhisay agagaarka Acropolis, waxaana la muujiyey in sidoo kale halkaas uu ku yaallay qasri Mycenaean ah.
Waa maxay Tbourida?
Tbourida waa dhaqan ficil raacid qadiim ah oo u adeegi jiray sidii cibaadada reer baadiyaha markay ka soo noqonayso safar ama taariikho muhiim ah.
Dharka caadiga ah ee Ustaraaliya
Dharka Dirndl iyo lederhosen waa dharka caadiga ah ee Austrian
Halyeeyga wiyisha Torre de Belém
The Torre De Belém iyo sheekada ka dambeysa shaqada qaab dhismeedka wiyisha ee dusha sare ee munaaradda
Jilayaasha Irishka oo ka dhigaya wax weyn Hollywood
Colin Farrel, Liam Neeson iyo Pierce Brosnan ayaa ka mid ah jilayaasha Irishka ee ku guuleystay Holyywood
Barashada farshaxanka Amsterdam
Amsterdam waa magaalo farshaxanku aad u joogo oo aad u aadi karto waxbarasho dhowr sano xarumo kala duwan oo muhiim ah.
Qoob ka ciyaarka Sirtaki, waa caan laakiin ma ahan dhaqan
Qoob ka ciyaarka Sirtaki, qoob ka ciyaarka caanka ah ee Griiga
Xiisaha Ruushka, maalmaha dhalashada, cabitaanka iyo farriimaha
Waxyaabaha xiisaha leh ee Ruushka iyo dhaqanka si ay si fiican ugu fahmaan dariiqa ay ula xiriiraan una gudbiyaan dareenka iyo kalgacalka
Filimada qaar waxaa lagu duubay muuqaalka muuqaalka Griiga
Filimada qaar ayaa lagu duubay Griiga
Isticmaalka Tubaakada, waa dhibaato daran oo ka jirta Shiinaha
Shiinaha iyo dadka sigaarka caba, waa dhibaato daran
Kaniisadda Millennium Saddexaad, kaniisad casri ah oo ku taal Rome
Kaniisadda Millennium Saddexaad, dhismaha casriga ah ee Rome
Mufakiriin Giriig ah, qoraayo iyo falsafad, qayb II
Calaamadaha Giriiggii hore
Ahraamta ugu weyn dalka Masar
Caan ka ah adduunka oo dhan, Ahraamta Masar waa meesha ugu weyn ee soo jiidashada dalxiiska ee soo jiidata tobanaan kun ...
3 meelood oo lagu booqdo Masar
Masar waa dhul taariikhi ku xardhan, taas oo ka dhigaysa meesha ugu sarreysa ee booqdayaasha ...
Maaskarada Shiinaha, qayb ka mid ah farshaxanka dadweynaha
Maaskarada opera ee Shiinaha
Dhaqanka Nederlandku waa noocyo kala duwan, oo ka tarjumaya kala duwanaanshaha gobolka iyo sidoo kale saameynta shisheeye ee ay ugu wacan tahay ganacsadaha ...
Kirismaska ​​ee Marooko
Dabaaldegyada Kirishtaanka dhexdooda, Kirismaska ​​waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, maaddaama 25-ka Diseembar kasta ...
Ku-biirinta Muhiimka ah ee Hindiya
Aynu wax ka baranno wax ku darsiga ugu muhiimsan ee Hindiya ay na siisay. Aynu ku bilowno sheegidda mowduuca xisaabta. Hindiya ...
Haweenka Hindida U Dagaalama Xoriyada
Markan waxaan la kulmi doonnaa kuwa ugu muhiimsan ee halgamayaasha xorriyadda haweenka ee Hindiya. Aynu ku bilowno sheegista Rani ...
Kaniisadda laba iyo tobanka rasuul ee Kremlin-ka
1653, Baadariga Nikon wuxuu amar ku bixiyay in la dhiso guri sharaf leh, seddex sano kadib dhismaha wuxuu ...
Muddadii ugu horreysay ee muhiimka ahayd ee naqshadaha Nederlandku waxay ahayd xilligii Dahabka Nederlandka laga bilaabo bilowgii ...
Masaska ugu sunta badan waxay ku nool yihiin Australia
Australia gudaheeda waxaan ka heli karnaa qaar ka mid ah masaska ugu sunta badan adduunka. Tusaale ahaan, aan ku bilowno sheegista Maska Tiger, ...
Maxay yihiin magaalooyinka ugu dadka badan Australia?
Markan waxaan la kulmi doonnaa magaalooyinka ugu dadka badan Australia. Aynu ku bilowno xusidda Sydney, oo ku taal New South Wales, magaalo ...
Markan waxaan la kulmi doonnaa qabiilooyinka ugu muhiimsan Hindiya. Aynu ku bilowno sheegidda Bodos, qowmiyadda ...
Dagaalada iyo Dagaalada Hindiya
Maanta waxaan baran doonnaa dagaalladii iyo dagaalladii ugu muhiimsanaa Hindiya. Aynu ku bilowno tilmaamida Dagaalkii Plassey ...
Dagaalada Hindidii Hore
Markan waxaan ogaan doonnaa qaar ka mid ah dagaalladii ugu muhiimsanaa iyo dagaalladii Hindidii Hore. Aynu ku bilowno sheegista ...
Maxay yihiin gobollada cusub ee Hindiya?
Markan waxaan ogaan doonnaa kuwa ugu dambeeyay gobolada Hindiya. Aynu bilowno adoo sheegaya Chhattisgarh, gobolka ...
Gobollada leh tirada ugu badan ee dadka ku nool Hindiya
Maanta waxaan ogaan doonnaa kuwa ah gobollada ugu tirada badan dadka Hindiya. Aynu bilowno inaan xusno Bihar, ...
Caadooyinka iyo caadooyinka jasiiradda Tenerife
Dhammaan jasiiradaha Canary waxaa ka jira caadooyin iyo dhaqammo badan, oo intooda badani ku lug leeyihiin jawi xafladeed, ...
Qoraayaasha Waaweyn ee Suugaanta Hindida
Suugaanta Hindiya waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan uguna qadiimsan adduunka. Waxaa xusid mudan in suugaanta Hindiya ...
Riwaayadaha ugubka ah ee Australiyaanka ah
Markan waxaan la kulmi doonnaa suugaanleyda Australiyaanka ah ee ugu wanaagsan. Aynu ku bilowno tixgelinta Kate Morton, oo ah qoraa soo saartey ...
Farshaxanka Griiga waqtiga
Farshaxanka Griiggu wuxuu astaan ​​u ahaa dhammaan dhaqanka reer galbeedka. Moodooyinka la isticmaali jiray waqtiyadii hore waxay ahaayeen ...
Caadooyinka iyo dhaqamada ku yaal Jasiiradaha Canary
Jasiiradaha Canary waxay leeyihiin dhaqammo iyo dhaqammo hodan ah, kuwaas oo badankood ay ka mid yihiin xaflad caan ah. Cunnooyinka ...
Dooxada Guayadeque ee Gran Canaria
Cagaarka Barranco de Guayadeque waa mid ka mid ah dooxooyinka ugu quruxda badan jasiiradda Gran Canaria. Cactus,…
Luxor, oo ah magaalada leh boqol irdood
Luxor waa magaalada qadiimiga ah ee Thebes oo ku taal daanta bari ee wabiga Niil, oo ka mid ah meelaha ugu waaweyn ...
Fannaaniinta Caanka ah ee reer Australia ee Dunida
Maanta waxaan xusi doonnaa fannaaniinta reer Australia ee ugu caansan adduunka. Aynu ku bilowno sheegidda Andy Gibb, xubin hore oo ka tirsan ...
Bandura, gitaarka Ruushka
Bandura waa aalad xadhig caan ku ah taariikhda muusiga ee Yukreeniyaan. Wuxuu isku daraa cunsuriyada iyo ...
Caddaan iyo buluug Shiinaha ah, oo sida ugu fiican loo yaqaan
Caynka iyo buluugga Shiinaha ee loo yaqaan 'porcelain' waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan Shiinaha ee adduunka.
Dharka hidaha iyo dhaqanka ee Ustaraaliya
Dharka Dirndl iyo dharka Lederhosen, dharka caadiga ah iyo kan caadiga ah ee Awstaraaliya
Halyeeygii Aisha Kandisha
Halyeey asalkiisu yahay reer Marooko wuxuu leeyahay aktaradeeda Aisha Kandisha, oo ah qof sixran oo dheddig ah oo ku nool ceelasha, ...
Baro Madxafka Qaranka ee Hindida Mareykanka
Magaalada New York waxay hoy u tahay tiro madadaalo matxafyo ah, oo mid waliba u gaar yahay ...
Muxuu Yahay Masjidka Weyn ee Tangier?
Waxaan sii wadeynaa inaan si qoto dheer u baarno gees kasta oo ka mid ah Tangier, magaaladeena loo doortay bishaan Absolut Morocco. Maanta waxaan u laabaneynaa ...
Thebes, waa magaalada ugu weyn ee Qadiimiga Masar
Mid ka mid ah meelaha xiisaha leh ee loogu safro mashiinka waqtiga ee taariikhda hore ee Masar waa Thebes, ...
Maxay ka dhigan yihiin midabada taargooyinka gawaarida Cuba
Maxay ka dhigan yihiin midabada taarikada gawaarida ee kaladuwan ee kala duwan
Ahraamyada cajiibka ah ee Masar
Waxaa jira in ka badan 100 Ahraamta Masar, laakiin kuwa ugu caansan waa Ahraamta Giza. Waxaa jira saddex Ahraam oo ...
Macnaha Oikos ee Giriiggii Hore
Oikos-ka ku yaal Giriiggii hore wuxuu ahaa gurigu mid ka kooban badeecooyin iyo dad ahaanba. Gobollada magaalada ayaa ...
Maxay yihiin magacyada gabdhaha ugu caansan Australia?
Markan waxaan kuu soo bandhigi doonaa magacyada ugu caansan gabdhaha Australia. Waxaa xusid mudan ...
Heesaha Caanka ah ee Ustaraaliya
Markan waxaan ka hadli doonaa heesaha ugu caansan Australia. Aynu ku bilowno sheegista John Williamson ee True Blue, hees ...
The Lady of Death, oo ah cirfiid Irish ah
Banshee, Marwadii Dhimashada
Maxay yihiin riwaayadaha ugufiican Australia?
Ma waxaad tahay qof jecel akhriska oo raadinaya riwaayado cusub oo aad aqriso? Miyaad sidoo kale xiiseyneysaa wax kasta oo la xiriira ...
Filim kale oo qosol badan oo laga keenay shineemo Shiinaha
Safarkii Galbeedka, Jinka Jinka, Majaajilo Kale Oo Shiineys ah
Isticmaalka naxaasta ee Shiinaha qadiimiga ah
Taariikhda isticmaalka naxaasta ee Shiinaha
Jaamacadda Qaahira waxay ku taal Giza, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay xarunta ugu wanaagsan ee wax lagu barto dalka oo la ...
Cathedral-ka weyn ee Athens
Kaniisadda Metropolitan ee Athens, oo ah kaniisadda caasimadda Giriigga
Fagaaraha, gogosha quruxda isboortiga ee Giriiggii hore
Fagaaraha, oo ah mid ka mid ah godadka quruxda isboortiga ee Giriiggii hore
Qoob ka ciyaarka Libaaxa, oo caan ku ah hiddaha iyo dhaqanka Shiinaha
Qoob ka ciyaarka Libaaxa, oo ah qoob ka ciyaarka caadiga ah ee Shiinaha
Tilmaamyo ay kula xiriiraan Giriiggii hore
Jidhku wuxuu ku hadli karaa dhaqdhaqaaqyo badanaa miyir qabo mararka qaarkoodna aan ahayn. Inta badan…
Timo saarista waxay ku dhalatay Griiga
Wax-soosaarku waa caado ka timaada dadka godadka ka shaqeeya, waxaa jira caddeyn in raggu ay isticmaaleen ...
Ilbaxnimada Mycenaean waa pre-Hellenic laga soo bilaabo dhammaadka Da'da Maarta. Dhamaadkii qarnigii XNUMXaad Heinrich Schliemann ee ...
Tobanka atirisho ee ugu quruxda badan Japan
Liiska ku qor tobanka atariisho ee ugu quruxda badan Japan.
Waxyaabaha caadiga ah ee Mykonos
Wax soo saarka caadiga ah ee jasiiradda Mykonos
Jaale, midab boqortooyo
Taariikhda isticmaalka midabka jaallaha ah ee Shiinaha
Iiddii San Antonio ee gobolka Castellón, dhaqanka iyo dabka
Ciida Sant Antoni waxaa loo dabaaldegaa Janaayo 17 dhacdooyinka sharaftiisa waxaa loo qoondeeyay maalintaas, dhamaadka usbuuca ka hor, kadib, ama xitaa soconaya illaa iyo bisha Febraayo Xaqiiqdu waxay tahay inay jiraan degmooyin yar oo ka tirsan gobolka Castellón oo aan u dabaaldegin ciida Sant Antoni. Inta badan degmooyinku waxay qabtaan barnaamijyo lagu sharfayo awliyadan, ilaaliyaha xoolaha, kuwaas oo xididdo hoose ku leh dhulka miyiga ah oo weli ku sii jira dhaqankeenna casriga ah, mararka qaarna waxoogaa ka qallooca dhiirrigelintooda awoowayaasha iyo xaaladaha kale ee ilaaliya dhammaan nuxurka caadooyinka ay hayaan oo ay sheegtaan dawladaha hoose ee Castellón inay yihiin calaamado dhab ah oo aqoonsi.
Qubeyska Stabian, ee Pompeii
Qubeyska Stabian, dalxiiska Pompeii
Waqtiyada firaaqada iyo madadaalada Mareykanka
Mareykanka wuxuu leeyahay jardiinooyin badan oo madadaalo, tanina waa mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan dalxiiska ...
Ondense Manuel Alfonso Ortells, xusuusta nool ee Mauthausen
Ondense Manuel Alfonso Ortells wuxuu ka mid ahaa in ka badan 10.000 oo Isbaanish ah oo loo masaafuriyey xeryaha lagu ururiyo waana mid ka mid ah kuwa yar ee maanta ku haray oo ka warramaya. Manuel Alfonso Ortells waa kartoonyahan. Waxay badbaadisay noloshiisa inuu u shaqo tago xafiiska dhismaha beerta isla markaana ka sameeyo sawirro qaawan oo lagu beddelayo qaybinta cuntada.
Boqortooyada Griiga, waa wax la soo dhaafay
Matxafyada waaweyn ee Brazil
Intii lagu gudajiray qarniyadii gumeysiga, Brazil waxay aragtay malaayiin soogalooti ah iyo addoomo ka kala yimid adduunka oo dhan. Waa maxay…
Dhiirrigelinta Miletus iyo korontada
Xogta taariikh nololeedka Thales of Miletus xoogaa lama hubo laakiin way u janjeeraan maxaa yeelay wuxuu ku dhashay magaalada Miletus ...
Matxafka guud ee Hans Gross Museum of Criminology ee ku yaal Graz
Jaamacadaha Dhexe ee Oxford
Oxford waxaa laga yaabaa inay noqoto meesha ugu fiican ee loogu talagalay dalxiisayaasha booqanaya England, maadaama 'magaaladan riyooyinka' ay gaaban tahay ...
Heracles iyo Beerta Hésperides
Caddooyinka Griigga waxaa ku jira sheekada Beerta Xaseefada, meesha ay ku taal oo aan la hubin. Hera waxay heshay sida ...
Ruslan iyo Ludmila, gabay halbeeg u ah Alexander Pushkin
Ruslan iyo Ludmila waa gabay 1820 ah oo uu qoray Alexander Pushkin, oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay qorayaasha waaweyn ee ...
Alaska iyo Anchorage Indian
U dhawaanshaha dibedda weyn waa sababta ugu cad ee loo booqdo Anchorage, magaalo ku taal ...
Muji, kabaha alwaaxa Shiinaha
Naqshadeynta Ruushka: Vera Mukhina
Vera Mukhina shaki la’aan waxay ahayd farshaxan-yahankii ugu weynaa xilligii Midowgii Soofiyeeti ee soo jiiday fikradaha badan ee farshaxanka oo ay ku jiraan ...
Maalinta magaca, caadada Griiga
Maalinta magaca, dhaqan Griig ah
Qarsoodiga asalka Berberka
Mar kasta oo aad booqato Marooko ama aad sahamiso meelaha ay xiiseyneyso, waxaad badanaa heleysaa calaamado ilbaxnimo hore ...
5 filim oo muhiim ah shineemo Marooko
Qodobka aan uga faalooneyno 5 filim oo muhiim ah shineemo Marooko.
Bushimaha guduudan ee dumarka Shiinaha ee hore
Dibnaha cas ee haweenka Shiinaha qadiimiga ah
Dhalooyinka shiinaha ee caadiga ah
Dhalooyinka shiinaha lagu shiido
Dharka caadiga ah ee Crete
Isha Tláloc ee Bosque de Chapultepec
Tlaloc, ilaaha roobka iyo dhulka, mid ka mid ah ilaahyada ugu faca weyn ee Mesoamerica, mid ka mid ah kuwa ugu ...
Ciidaha iyo dhaqamada Granada
Grenada waa jasiirad yar oo ka mid ah Antilles, kuna taal waqooyiga Trinidad iyo Tobago, waqooyi-bari ee ...
Asalka Giriigga ee mime
Asalka riwaayadaha mime ee Galbeedka waxaa laga helaa masraxa qadiimiga ee Griiga, xafladaha ilaaha Dionysus ...
The flora ee jasiiradda El Hierro
El Hierro, iyo sidoo kale inta kale ee jasiiradaha Canary, waxaad ka heli doontaa tiro badan oo ah noocyada ...
Ferécides ee Syros
Ferécides de Siros wuxuu ahaa filosoof Griig ah ka hor Socrates, qarnigii XNUMXaad ee dhalashada miilaadiga wuxuuna macalin ka ahaa Pythagoras. Ku dhashay…
In kasta oo Maalinta Hooyada ay asal ahaan ka soo jeedo Mareykanka, dadka ku nool Shiinaha waxay u qaataan si aan leexleexasho lahayn tan ...
Matxafka Hermitage, taariikhda iyo shuqullada aan la oggolaan karin
Matxafka Hermitage waa mid ka mid ah matxafyada ugu waawayn adduunka ee ku yaal ...
Farshaxanka iyo dhaqanka Ruushka
"Ruushku waa halxidhaale ku duudduuban qarsoodi ku jira hal-adayg." Erayadan uu ka dhawaajiyay ninka caanka ah ee u dhashay Ingiriiska Winston Churchill ...
Dhamaan Maalinta Nafta ee Shiinaha
Maalinta Dhimashada ama Damaashaadka Qingming waxaa loo dabbaaldegaa 04ta Abriil 2012, waana marka ...